Ngabe Ngidinga Ukuqasha Ummeli Ngokuvalwa Kwempahla Yami eNJ? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Law Real Estate / Ngabe Ngidinga Ukuqasha Ummeli Ngokuvalwa Kwempahla Yami eNJ?
Ngabe Ngidinga Ukuqasha Ummeli Ngokuvalwa Kwempahla Yami eNJ?
Kwangathi 6, 2019 Law Real EstateShiya amazwanaLazaro Cardenas
Ngabe Ngidinga Ukuqasha Ummeli Ngokuvalwa Kwami Kwezezakhiwo eNew Jersey?
Ngithola lo mbuzo okuningi, futhi ngenkathi ukuthengiswa kwezindawo zokuhlala e-New Jersey zigxile kakhulu futhi zisebenzisa inkontileka efanayo yokuthenga, kunezingqinamba eziningi ezingokomthetho ezingase ziphakame ukuthi umenzeli wakho wezezindawo ngeke akwazi ukuphatha futhi ukumelwa kwezomthetho kungaba inketho ezihlakaniphile nezidingekayo.
Inqubo yokuthenga noma yokuthengisa indlu iyinkimbinkimbi futhi abantu abaningi bakuthola kulula ukungena kuyo nommeli eceleni kwabo. Kuyimibhalo ebukhali futhi imibhalo ebukhali yesikhathi ingashaywa kalula futhi ibambezele inqubo noma ibulale konke ukuthengiselana. Kungasiza ukuba nomuntu ojwayelene nenqubo ukukusiza ekubhekaneni nakho. Ezinye izingxenye zomsebenzi njengoba kuhlolwa, ukunganakwa kokuthi ubani okhokhela ukulungiswa okudingekayo, nokulondolozwa kokuxhumana nomthengisi ngommeli wabo kwenzeka ngokushesha okukhulu futhi ummeli onolwazi uzokwazi ukubhekana nazo ngesikhathi esifanele.
Nayi enye yezinkinga lapho ukuba nommeli kungakongela khona ikhanda eliningi nemali kamuva.
Indawo oyithengayo inabaqashi abafuna ukumxosha ukuze uqashe indawo kumngane. Ngabe lokhu kuzosebenza?
Kuthiwani uma abaqashi beqasha iyunithi engekho emthethweni kumthengisi? Lokhu kungathinta kanjani amandla akho okuxosha noma ukuqasha esikhathini esizayo?
Kuthiwani uma ufuna ukuqasha indlu isikhathi eside, unyaka noma emibili, ngaphambi kokuyithenga?
Udinga usizo lokubuyekeza nokuqonda ukuqasha ngokubambisana, noma inkontileka entsha yasekhaya eyalungiswa ngonjiniyela.
Uthenga ikhaya ngemalimboleko yangasese kusihlobo noma umngani.
Uthenga impahla ngokuhlanganyela nabanye futhi udinga ukwakha isivumelwano somthengi futhi ubhale ukuthi isihloko sizobanjwa kanjani.
Ufuna ukufaka isigatshana sokukhuphuka esizokunikeza ilungelo lokuhlangabezana noma lokudlula noma yikuphi ukuncintisana okutholwa ngumthengisi.
Umthengisi ukuvumela ukuthi uhambise ezinye zezinto zakho ungene egalaji lasekhaya noma engaphansi kwangaphambi kosuku lokuvala. Nobabili nizofuna ukucacisa ukuthi lokhu kuyipropathi yenu nokuthi ungawubhekisisa kanjani lomonakalo kuwo.
Ungathanda ukwenza isiqiniseko sokuthi noma yimuphi umqashi okwamanje osekhaya uzophuma ngaphambi kokuvalwa.
Unika umthengisi isivumelwano 'sokusebenzisa nokuhlala'. Lokhu kuvumela umthengisi ukuthi agcine ubunikazi bendlu isikhathi esingaphezu kokuvalwa, kepha ufuna ukuqiniseka ukuthi umthengisi uzokukhokhela irenti yemakethe efanelekile ngaleso sikhathi.
Izinkinga ziqhamuka umbiko wesihloko efana nomgwaqo ohlanganyelwe phakathi kwepropathi oyithengayo nendlu yangomakhelwane, kepha lokhu akubonakali ku-tile.
Kukhona i-easement noma ukungenelela endaweni leyo engelona isihloko. Masithi ikhaya olithenga komakhelwane lisondelene nomthengisi banokuphambuka komlomo okuvumela omakhelwane ukufinyelela indawo yokupaka izimoto zabo ngokusebenzisa indlela yomthengisi. Uma ungumthengi wasekhaya ungahle ufune ukwazi ngqo ukuthi ayini amalungelo omakhelwane wakho, kanye nemikhawulo yalawo malungelo. Uzofuna ukwehlisa lesi sivumelwano ukuze ubhale.
Ngenkathi lokhu okungenhla akulona uhla oluphelele lwezinkinga ezingaba khona lapho kuthengiswa izindlu, kukunika umbono wobungozi obukhona obuhambisana nokuthengwa nokuthengiswa kwezindawo ezithengiswayo nokuthi kungani kungaba ngumqondo omuhle ukuthi ube nomthetho isethulo sokuthengiselana. Inani lokuba nommeli wokuthengiswa kwezindawo onokwethenjwa futhi onolwazi ohlangothini lwakho ukukusiza kulandele ukuthengiselana futhi ukweluleke kuzo zonke izinyathelo zokuthengiselana kwakho kudlula izindleko ezincane zokukhokhela ukumelwa ngokusemthethweni kwezokuthengiswa kwezezakhiwo eziningi. Uma unemibuzo maqondana nokuthengwa noma ukuthengiswa kwendlu yakho sicela ushayele inkampani yami e844.533.3367 ukukhuluma ne Ummeli wezakhiwo Noma vakashela https://focusedlaw.com ukuhlela i-aphoyintimenti online.